Taxane iftiin dheer kadib
Taxane xamaasad leh
Dufcaddii master photoluminescent
Quruurux caag ah
Quruurux dhalaalaysa & quruurux
Taxane quruurux xabagta
Loox adag & filim
Nidaamka baxsashada degdegga ah ee iftiinka iftiinka
Jaad Photoluminescent & shaqooyinka farshaxanka
Duubka iftiinka & Dharka
Sheekada PSPA, heerka kala soocida dhalaalka ee agabka iftiimaya ee dheer ka dib iyo midabada iftiinka ka dambeeya
Sheekada PSPA Nalka kala soocida halbeegga agabka iftiinka daba-dheeraada iyo midabada iftiinka-dheer ee iftiinka dambe PSPA (Ururka Badbaadada Sawirka) waa urur, ka mid ah waxqabadyada kale, ku talinaya heerarka la aqbali karo ee waxqabadka ee photolumi...
Maxay tahay sababta loo dooranayo sawir-qaadista sawir-qaadista halkii aad ka dooran lahayd midabka sawir-qaadista?
Maxaad u dooratay Glow ee masterbatch-ka mugdiga ah bedelkii budada iftiinka leh? Culayska gaarka ah ee budada iftiinka ah ayaa aad uga sarreeya, way degi doontaa haddii si toos ah loogu daro resin. Waxay si fudud u yeelanaysaa khilaaf inta lagu jiro habka duritaanka si ay alaabtu u noqoto mid madow. Masterbatch ayaa...
Duulimaadyo iftiin leh, tiirar iskiis iftiimaya iyo khadadka dhexda iftiinka ayaa lagu dabaqay dhismaha macbadyada Tibet ee Tibet
by admin 21-08-23
Waa maxay sababta loo dooranayo masterbatch nalka halkii aad ka dooran lahayd midabka luminescent?
by admin 21-07-14
Grand Luminous - doorashadaada ugu fiican si aad u iibsatid alaabta iftiinka gudaha Shiinaha
by admin 21-07-08
Tignoolajiyada Weyn ee Luminous — doorashadaada ugu fiican ee aad ku iibsan karto agabka iftiimaya gudaha Shiinaha Waxaan leenahay in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo xirfadeed qalabka iftiinka. Waxaan leenahay xirfado agabka iftiimaya. Awoodeena sidoo kale waa walxo iftiimaya: Sawir...
Soo saarista badeecada cusub: Quruurux iskii u iftiimay
by admin 21-06-28
Daah-furka alaabta cusub: Quruurux iskii u iftiimaya Habka cusub ee resin waa quruurux iftiin leh oo qaab wareegsan leh, dhalaal sare, aan sun ahayn, aan waxyeello lahayn oo aan shucaac ahayn, Waxaa loo isticmaali karaa: gudaha gudaha iyo dibadda muuqaalka, ubaxa ubaxa, isha, Villa gaarka ah, ubaxa barxadda barkad, muuqaalka barkada kalluunka, muusiga f...
Habka wax soo saarka ee dariiqa luminescent
by admin 21-03-01
1. Daaweynta koorsada saldhiga: ka hor inta aan la dhisin laami iftiin ah oo midab leh, koorsada saldhiga waa in la nadiifiyaa. Daaweynta ka dib, dusha koorsada saldhiggu waa inay ahaataa mid qallafsan, nadiif ah oo ka madax bannaan balli, waana in lagu hayaa xaalad qoyan. 2. Awoodda...
Safar cusub, yool cusub iyo bar bilow cusub oo agabka iftiimaya
Bilaw cusub, safar cusub, yool cusub Bilowga sannadka cusub ee Shiinaha, wax kastaa waxay u muuqdaan kuwo cusub. Kadib sanadka cusub ee dhaqanka ee Shiinaha, anaga, luminous, waxaan si rasmi ah u bilownay shaqada, dhammaan diyaargarowgana waa diyaar. Bilowgii sanadka cusub ee Shiinaha,...
Maxaad u dooratay Glow ee masterbatch halkii aad ka dooran lahayd budo iftiin leh?
by admin 21-01-25
Maxaad u dooratay Glow ee masterbatch halkii aad ka dooran lahayd budo iftiin leh? Maxaad u dooratay Glow ee masterbatch halkii aad ka dooran lahayd budo iftiin leh? Culayska gaarka ah ee budada iftiinka ah ayaa aad uga sarreeya, way degi doontaa haddii si toos ah loogu daro resin. Waxay si fudud u leedahay khilaaf inta lagu jiro habka duritaanka ...
Sannad Cusub oo Wacan !
by admin 21-01-01
Waad ku mahadsan tahay taageeradaada, aaminaaddaada iyo shirkaddaada 2020. Waxaan rajeynayaa inaan sii wadi doono inaan is taageerno oo aan is caawinno 2021, oo aan u abuurno xaalad cusub oo agabyo iftiimaya iyada oo loo marayo dadaalka wadajirka ah. Waxaan sii wadi doonnaa inaan xasilino tayada badeecadaha, sii wadno inaan daba galno waxtarka-qiimeynta...
Filimka Iftiiminta ee iibinta kulul ee 2020
Marka loo eego shuruudaha xarfaha kumbuyuutarka, daabacaadda inkjet-ka dhijitaalka ah, daabacaadda shaashadda iyo daabacaadda UV, xayawaankeena, filimka iftiinka PVC waa doorasho wanaagsan. Iftiin sare, waqti dheer oo dhalaal ah, wax qabad qiimo sare leh. nala soo xidhiidh wixii faahfaahin ah. Kuwa soo socda waa xaashida xogta tixraacaaga...
Sagxadaha iftiinka leh ee sagxadaha leh ayaa noqda shayga ugu muhiimsan ee calaamadaha daadgureynta degdegga ah
by admin 20-09-25
Sagxadaha iftiinka leh ee sagxada leh ayaa noqda sheyga ugu muhiimsan calaamadaha daadgureynta degdega ah Hal mar rakibaadda, dib u warshadaynta joogtada ah, wareegga nolosha aadka u dheer ee alaabtu waxay leedahay Iftiin iftiin sare leh oo dhalaalaya Xirashada, caabbinta cimilada, caabbinta daxalka, caabbinta saamaynta, resi naxdin leh...
12 Xiga > >> Bogga 1/2